Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Oo la kulmay Wakiilka QM Ee Soomaaliya:(Sawiro) – Hareerley News
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Oo la kulmay Wakiilka QM Ee Soomaaliya:(Sawiro)
Soomaaliya oo ka qeyb-galeysa Shir looga hadlayo Arrimaha qaxootiga
Shirka 70-aad ee hay’adda qaxootiga adduunka ayaa maanta ka furmaya magaakada Geneva ee dalka Switzerland waxaana ka qeybgalaya wafuud heer caalami ah. Shirka ayaa sanadkaan waxaa diirada lagu saaraya arrimaha qaxootiga iyo dhibaatooyinka heysta dadka barakacay sidii xal loogu heli lahaaa nolol cusubna loogu sameyn lahaa. Soomaaliya ayaa waxaa shirka ku matalaya wafdi uu hoggaaminayo […]
Ciidamada Dowlada Ee haramacadka Oo fashiliyey Qarax Miino
Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa fashiliyay Miino nooca Dhulka lagu aaso oo la dhigay inta u dhaxaysa Siinka Dheer iyo Ceelasha Biyaha ee duleedka Magalada Muqdisho,sida ay baahisay Warbaahinta Dowladda Soomaaliya. Dadka degaanka ayaa ciidanka ku soo wargaliyay in Al-Shabaab wadada dhinaceeda ku aaseen qaraxa isla markaa ciidanka oo si dhaqso […]
Malaayiin Soomaali ah oo maanta taagan Banka Carafo
Soomaalida sanadkan xajineysa ayaa saakay ka soo ambabaxay degaanka Mina iyaga oo ku soo jiheystay degaanka Carafo, halkaasi oo muslimiinta ku gudanayaan mid ka mid ah Rukniyada ugu muhiimsan Xajka. Xujeyda ayaa saakay basas looga soo qaaday deegaanada ay degan yihiin, waxaana ay isugu tagayaan dhulka barakaysan ee Sacuudiga si ay u soo gutaan waajibaatka […]
Madaxweyne Farmaajo oo Casho Sharaf ku maamuusay Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti:-(Sawiro)